“Gaaffiin Barataa Oromoo Hanga Kabajamutti, Sossobbaa Wayyaaneen Dagamanii Afaan Qabachuun Gabrummaa Ofirratti Jabeessuu Dha” | QEERROO
“Gaaffiin Barataa Oromoo Hanga Kabajamutti, Sossobbaa Wayyaaneen Dagamanii Afaan Qabachuun Gabrummaa Ofirratti Jabeessuu Dha”
Posted on November 21, 2017 by Qeerroo
Gaaffiin mirgaa gaafatamaa tureen hanga har’aa deebiin uummataaf deebi’u hidhaaf ajjechaa ta’uu marruu nii hubanna. Akeekni gaaffii barattoota Oromoo sirna garboonfataa Wayyaanee suphuun Wayyaanee haaromsuu utuu hintaane humna afaan Qawweetti amanu dhabamsiisuun, abbaa biyyummaa halagaan molqamne deeffachuudha. Mirga abbaa biyyuummaaf taasifamu keessatti gaaffiin uummataa hanga sirni garboonfataa hundeen buqqa’utti jabaatee kan itti fufu malee, gaaffii addaan ciccitaaf hiiriira addaan ciccitaa gaggeessuun garbummaa qancarsuun nama nyaataa garboonfataa gabbisuudha. Gaaffiin barataa hanga deebi’utti barnoota hinbarannuun barnoota mormuu utuu hintaane sirna bulchiinsaa gaaffii uummataa karaa nagaa gaafatamu gara gaaffii waraanaatti jijjiiru balaaleffachuu ta’uu barataan keenya hubachuu qabdu. Har’a addunyaa dimokiraasii keessa mirga keenya molqamnee ardaaf qabeenyaa keenya halagaan saamamnee akka sinbiraa mana jireenya daggala godhannee jirra.
Harmeen Oromoo kumootaan lakkaahaman ardaaf qabeenyaa isaaniirraa afaan qawween buqqaa’anii jireenya harka namaa eeggachuutti jiru. Biyyi abbaa keenyaa biyyi Oromiyaa saamammee dhumaa jira. Har’a maqaan Oromiyaa hanga baddutti adeemaa jirti. Uummataa Oromoo 600000 kuma dhibba ja’aa ol ardaasaarraa buqqaa’anii jiru. Sirni uummataa keenya lafarraa buqqaasaa jiru sirna Wayyaanee ta’uu beekuun hanga mootummaan Wayyaanee hfeenan barbadooftutti barataan Oromoo yuunibarsiitii keenya barnoota lagachuun uummataa keenyaaf dirmannaa gochuun dirqama Oromummaan mara keenyarraa barbaddu ta’uu hubachuun Fincila Xumura Garbummaa finiinsuuf yeeroon qabnu amma.
Dabballoota Wayyaanee dirqama dabballummaa fudhatanii uummataa keenya burjaajessan kamiif gurra laachuun kufaatii hamaa kufaatii garbummaa keessatti nu geessa. Caasaawwan OPDO kamirraa Bilisummaa kan eeggannu akka hintaane hubachuun barbaachisaadha. Sabaaban isaa Hidhamuun, Ajjeefamuun, Godaansifamuun, Jibbamuun uummataa Oromoo ka duraarra ittuu hammaataa jira. Gaaffiiwwan kaleessaa gaafachaa turre har’a deebii argataa hinjiran. Kanaaf qaamota OPDO uummataa afaanfajjeessan dhagahuun bittaa garbummaa uummataa keenyatti dabaluudha.
1, Gaaffiin keenya tuffatamuu isaa karaa hedduu mooraan ragaa bahataa jira.
2, Saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii Oromoo akka Arabsan maallaqaan ijaaree akka barbaadutti saba Oromoo arrabsiisaa jira. Seenaawwan dhiyoo yaadataman kan mooraan Jimmaa Yuunibarsiitii Oromoo irratti dalage “gazetaa Inquun” kan saba Oromoo arrabsu akka mana kitaabaa (library) galu caaphaan mirkaneessee bara 2014 keessa Oromoo akka argu sabni boraan akka abaaruuf daandii saaqaa tureera. Har’as gocha sana kallattiin raawwataa jira.
3, Gaaffii nuti gaafannuuf hidhaaf dararaa hamaa nurraan geessisuun alatti deebii gahaa nuu laatee kan hinbeekne, rakkoo ofii uumuun barattoota Oromoo addunyaa barnootaan ala taasisuu irratti adda durummaan dalagaa tureera. Kanaanis barattoota 2014 keessa gaaffii haqaa gaafatan dirree barnootaan ala kanneen ta’anii jiran hanga ammaan addunyaa dukkanooftuutti darabatamanii jiru. Ammas adeemsa sana kan hinjijjiirin jiru ta’uu tuffii gaaffii keenyaaf qabuun mirkaneeffanneerra
4, Gaaffii barataan Oromoo gara dabarsuu cinatti gartuuweaan siyyaasaa mooraa keessatti ijaaruun Oromoon akka wal qoqqoodnuuf shira xaxaa kan jiru ta’uu ragaawwan gurguddaan argaa jirra. Gartuu siyyaasaa uummataa keenya lafaaf qe’ee dhabsiisaa jiruuf dahoo ta’ee innis nurratti ijaaramee dhiibbaa nurratti godhaa jiruun kan seenaaf seeraan gaafatamu ta’uu hubachiisuu feena
5, Barattoota gaaffiin nagaa gaafatan qabuuf marii jabaarra jiraachuu isaanii icciiti gola isaanirraa argannen hubannee jirra. “Barattoota ijoo ta’anii baratan akka fincilu gochaa jiran adaan nuuf baasaa!” Jechuun ijoollee caasaa isaanii ta’an barataatti lakkisanii jiru. Barataan Kamuu barnootatti kan deebi’u taanan tokko tokkoon funaananuuf qophaa’aa akka jiran hubannee waan jirruuf namni kamuu ejjennoo keenyarra taruun diina uummataa diina Qeerroo ta’uu raagessaa jira. Isa kanarratti tarkaanfii dandeenyu akka fudhachuu qabnu jabeessinee ibsanna.
Waan ta’eef qabsoo jabaa eegallee jiru gadjabeessinee gochuun uummata keenya baha Oromiyaaf dirmannaa gochuun amma. Kanaaf gaaffiin barataan gaaffiin keenya hanga kabajamutti afaan qabachuun, walgaa’ii dabballoota Wayyaanee mooraa keessa irratti hirmaachuun halagaa of tuffachiisuudha.
Yeroon nuti garbummaa keessa bahuuf qabnu ammaaf amma qofa. Kanaaf Uummataa Oromoo nu faana hiriiree jiru gara boqonnaa waaraatti fiduun dirqama barataan qabudha. Mootummaa nageenya biyya abbaa keenya eegsisu Oromiyaa biyyattii keessatti gad-dhaabuuf sochii karaa nagaa taasisaa jirru gadjabeessinee gochuu qabna. Hanga mootummaa Ce’umsaa kan waraana maqaa Liyyiu ayiliitiin Oromiyaa halagaaf kutaa jiru nurraa dhorku dhaabbatutti qabsoo nii finiinsina!
Yuunibarsiitii Jimmaa irraa